Dhawunorodha nyowani macOS High Sierra Wallpaper | Ndinobva mac
Dhawunorodha nyowani macOS High Sierra Wallpaper
Apple yakatanga kuvandudza neMuvhuro, Chikumi 5 yekutanga beta vhezheni ye macOS Yakakwira Sierra. Nezita iri rehurongwa hwekushandisa, Craig Federighi pachake, Mutevedzeri weMutungamiri weSoftware, akatsanangura asvika pamusoro pegomo uye saka zita reiyi vhezheni.
Saka iyo Wallpaper kana Wallpaper yeiyo nyowani macOS yakaunzwa zviri pamutemo. Mune ino kesi, mushure mekutarisa mamwe mapikicha mune yekutanga yeshanduro dze beta, isu hatina kuwana chero chinhu chitsva, saka isu tinosiya yazvino kune avo vanoda kuiwedzera kune kwavo kumashure kweMac.
Chete Wallpaper rinodonha kwatiri, asi panguva ino hapachina anowanikwa. Chaizvoizvo, nhau dzakaburitswa mune ino yekupedzisira keyword hachisi chinhu chekunyora kumba nezvazvo, kunyangwe chiri chokwadi kuti tine iyo nyowani Apple File System, matekinoroji matsva kuitira kuti Mac yedu ive nesimba, kugadzikana, nekukurumidza uye zvakare maererano neyayo Manzana , MacOS High Sierra inoisa hwaro hwekuvandudza huchauya kumakomputa edu mune ramangwana.
Izvo zvitsva zvinoratidzwa zvinoramba zvichisanganiswa nezvimwe zveizvo zvisina kutaurwa nevakomana kubva kuCupertino nekuda kwekushaya nguva kana pamwe nekuti vanofanirwa kupolisha zvinhu, saka zvakanaka kuramba uchiona zvakadzama iyi beta yekutanga yeMacOS High Sierra uye tariro kuti ivo vachatanga vhezheni yacho nekukurumidza Ruzhinji beta kune avo vanoda kuyedza macOS nyowani isati yaenda zviri pamutemo. Parizvino izvo zvatinazvo ndiyo nyowani nyowani ine resolution 2880 × 1494 kukwanisa kunakidzwa nenzvimbo ino paMac yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Dhawunorodha nyowani macOS High Sierra Wallpaper
Waitadza sei kuzviwana.
Saka isu tiri kudzikisira zvishuwo… .hehe
Ndira 2018 ndiwo mwedzi wakasarudzwa kubvisa 32-bit kunyorera kubva kuMac App Store
8x37 Podcast: WWDC 2017 Kudzokorora